Articles tagged 'patson dzamara'
High Court quashes Dzamara's conviction 3 October 2018 HARARE - Pro-democracy activists Patson Dzamara and Makomborero Haruzivishe had their main conviction for “trumped-up” robbery charges quashed yesterday after challenging their sentence. Dzamara and his alleged accomplice Haruzivishe were sentenced to 12 months' imprisonment by Harare magistra...
Dzamara, Masarira case takes dramatic twist 24 January 2017 HARARE - A lawyer representing pro-democracy activists, including Patson Dzamara and Linda Masarira, yesterday humiliated the arresting officer for plagiarising the same statement previously submitted in court by his colleague. Obey Shava was representing Dzamara and Masarira together with Mak...
'Cabinet fiddles while kingdom burns' 2 December 2016 HARARE - Pro-democracy activists yesterday expressed shock and anger over Monday's Cabinet meeting which centred on modalities of stopping witch-hunters while the country faced an unprecedented economic meltdown. Consisting of 26 ministers, Cabinet after a full sitting, pronounced that rampant...
Mugabe: Architect of rights violations 25 November 2016 HARARE - That all nominees for this year's ZimRights sponsored People's Choice Award for defenders of human rights in the country are anti-President Robert Mugabe activists give credence to the widely held view that the nonagenarian is the architect of rights violations in Zimbabwe. From oppos...
Human rights defenders to be honoured 24 November 2016 HARARE - Human Rights activists Patson Dzamara, Sten Zvorwadza, Silvanos Mudzvova, Linda Masarira, Farai Maguwu, Evan Mawarire and legislator Jessie Majome are among 81 people that have been nominated for Community Human Rights Defenders Awards (CHRDAs) to be presented on Friday night. Zimbabw...
Defiant protesters dare Mugabe, govt 23 November 2016 HARARE - Pro-democracy activists have vowed to continue holding protests against President Robert Mugabe and his under-fire government, despite increased State thuggery and human rights violations by security agents. This comes as Mugabe's panicking government has cranked up its suppression of...
Anti-Mugabe activists head to UK 16 October 2016 HARARE - Anti-President Robert Mugabe activists — including exiled musician Thomas Mapfumo are next week headed for the United Kingdom (UK) where they will next week, mobilise Diasporans to bring back the troubled southern African nation into the spotlight. This comes as pro-democracy activist...
World Bank snubs Mugabe govt 29 September 2016 HARARE - The World Bank (WB) has assured Zimbabwean activist Patson Dzamara that it has no intention of bailing out President Robert Mugabe's government by extending money to his administration. This was in the aftermath of Dzamara having petitioned the WB during his recent visit to the United...
Court issues arrest warrants for protesters 27 September 2016 HARARE - Harare magistrate Arnold Maburo yesterday issued warrants of arrest for three anti-government protesters who failed to turn up for trial over a robbery case involving Patson Dzamara. Dzamara is jointly charged with Oliver Chikumba, 32, Tatenda Mombeyarara, 33, Pride Mukono, 26, and Ma...
Dzamara robbery trial in September 16 August 2016 HARARE - Trial has been set for September 26 in the robbery case of Patson Dzamara — brother to missing activist Itai. Dzamara is jointly charged with Oliver Chikumba, 32, Tatenda Mombeyarara, 33, Pride Mukono, 26, and Makomborero Haruzivishe, 33, on two counts of robbery and defeating the cou...